ब्रास--मार्ग स्नैप-इन कपलिंग निर्माताहरू र कारखाना - चीनमा बनेको - युहुआन गोल्डेन-पात वाल्भ
घर > उत्पादनहरू > ब्रास गार्डन होज वेयर > ब्रास क्विक एडाप्टर > ब्रास--मार्ग स्नैप-इन कपलिंग
हामी ब्राजलाई 3-मार्ग स्नैप-इन कपलिंग उच्च गुणवत्ता १ वर्षको ग्यारेन्टीको साथ आपूर्ति गर्दछौं। सुविधा र गति प्रमुख फाइदाहरू हुन्। यी कनेक्टरहरू वास्तवमै उपयोगी छन् र तपाईंको समय र प्रयास बचत गर्दछौं। हामी आफैलाई प्लम्बिंग फिटिंग, नली फिटिंग, नली युग्मन, बगैंचाको नली फिटिंग धेरै वर्षहरूमा समेट्छौं, धेरै जसो युरोप र अमेरिकाको बजारलाई ढाक्छ। उत्पादहरू फ्याक्ट्री प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनी हुन्, बढी ठूलो अनुकूल, तपाईं यात्रा र कारखाना मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ! हामी चीनमा तपाईको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौं।
ब्रास 3-मार्ग स्नैप-इन कपलि ofको उत्पाद परिचय
यो ब्रास--मार्ग स्नैप-इन कपलिंग भारी शुल्क कडा पीतल निर्माणबाट बनेको छ। ओ-रिंगको सामग्री एनबीआर Way. वे होज कनेक्टरको साथ वाल्भ (नल, जोइन्ट, फिटिंग, जंक्चर) डेलिभरी अघि, सबै वस्तुहरू यसको कामको चाप, चुहावट, सतह परिष्करण र थ्रेड परीक्षणको लागि कडाईका साथ परीक्षण गरिएको छ। ब्रास बगैचा नली युग्मनको अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी लगभग १ years बर्षदेखि सबै प्रकारका भल्भ, फिटिंग, बिबक र द्रुत जोडी इत्यादिमा विशेषज्ञता निर्माण गरिरहेका छौं। अधिकांश युरोप र अमेरिकाको बजारलाई कभर गर्दछ। हाम्रो कारखानाले उत्पादनमा उन्नत प्रविधि र उपकरणहरू ल्याएको छ। हामी फोर्जिंग र पंचि machine मेशीन, डिजिटल कन्ट्रोल गरिएको मेसिन, उपकरण सतह उपचार, काट्ने र प्रसंस्करण, र एक समन्वय प्रक्रिया भेला गर्न सुसज्जित छ। हामी अपेक्षा गरिरहेका छौं। चीन मा तपाइँको दीर्घकालीन साझेदार बन्नुहोस्।
ब्रास--वे स्नैप-इन कपलिंगको उत्पाद प्यारामिटर (विशिष्टता)
फोटो शो को रूप मा
/ / Ââ €
Product Feature And Application of ब्रास 3-way Snap-In Coupling
★ब्रास for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability
â˜ ... फिट 3/4 "थ्रेड गार्डन होज कनेक्शन
â˜ ... तपाईंको लचिलो नली वा हदको नली मर्मत गर्नुहोस्
अनुप्रयोग:स्प्रे नोजल, पानीको ट्यापमा फिट गर्दै र तपाईंको बगैंचाको नली पनि मर्मत गर्दछ
हामीसँग २ सेट वर्टिकल मसिनिंग सेन्टरहरू, १se०सेट सीएनसी लेथस, sets सेट सीएनसी ड्रिलिंग मेशिन, २ सेट हाइड्रोलिक व्हील मेशिन, sets सेट तातो फोर्जिंग मेशिन, sets सेट कोल्ड स्ट्याम्पि machines मेशिन र २ सेट बालुवा नष्ट गर्ने मेशीन छ, र हाम्रो कारखानाको मात्र स्वामित्व छैन उन्नत उत्पादन उपकरणहरू, तर उनीहरूको पेशेवर प्राविधिक कर्मीहरू र दक्ष श्रमिकहरूको ठूलो समूहको स्वामित्व छ, त्यसैले हामी उत्पादनको गुणवत्तालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने छौं।
Deliver,Shipping And Serving of ब्रास 3-way Snap-In Coupling
नमूना नेतृत्व समय: १day दिन
टी / टी, एल / सी दृश्यमा आदि।
A: सामान्यतया हाम्रो MOQ २००० pcs हो, तर हामी तपाईंको परीक्षण अर्डरको लागि कम मात्रा स्वीकार गर्दछौं।
प्रश्न: तपाईं ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: हामी बगैंचा भल्भमा विशेषज्ञता प्राप्त निर्माता हौं, र विश्वभर उत्पादनहरू बेच्दछौं
प्रश्न: तपाईंको वितरण समय कति हो?
A: यसले सामान्यतया days 45 दिन लिन्छ, हामीसँग ठूलो उत्पादन क्षमता छ जसले थोकको लागि पनि छिटो डेलिभरी समय सुनिश्चित गर्न सक्छ।
हट ट्याग: ब्रास--मार्ग स्नैप-इन कपलिंग, चीनमा निर्मित, निर्माणकर्ता, कम मूल्य, खरीद, छुट, कारखाना, सस्तो
ब्रास3वे युग्मनब्रास3वे गार्डन पानी नली दम्पतीहरु//4 "ट्रिपल पुरुष होज कनेक्टर
ब्रास नर गार्डेन नली क्विक कनेक्ट फिटिंग रबरको साथ
/ / Ââ € ब्रास थ्रेडेड महिला द्रुत कनेक्टर कपलिंग
ब्रास महिला एडाप्टर
ब्रास पुरुष एडाप्टर
ब्रास थ्रेडेड नर Gooseneck होज एडाप्टर
ब्रास होज अब Gooseneck शट-अफ भल्भ